Jidka webiyada: sifooyinka, muhiimadda iyo kaymaha dooxada | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 15/11/2021 10:05 | Geology
Waxaan ka hadalnaa banka euro-da webiga waxaan tixraacnaa xeebta ama cidhifka jirka biyaha. Waa dhulka ugu dhow badda, badda, harada, webiyada, durdurrada, iwm. Waxaa la dhihi karaa waxay la xiriirtaa booska kala guurka ee u dhexeeya deegaanka biyaha iyo deegaanka dhulka ku xiga. The jiinka webiga Waxay yihiin kuwo lagu garto inay leeyihiin dhir kala duwan iyo shaqo weyn oo ku jirta nidaamka deegaanka.
Sababtaas awgeed, waxaan maqaalkan u hibeeyay inaan kuu sheego wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato jiinka webiga, dhirtooda iyo muhiimada ay leeyihiin.
1 Dhirta daanta webiga
2 Faa'iidooyinka webiga
3 Kaymaha ku xidhan
4 Shaqooyinka kaynta dooxada
Dhirta daanta webiga
Dhirta daanta webigu waxa ay si qoto dheer u saamaysaa dabeecadaha jidheed ee webiga, xoojinta iyo inta jeer ee webiga, dariiqa, nabaad-guurka iyo awoodda gaadiidka, iyo xajmiga hadhuudhka ah ee qulqulkiisu ku xiran yahay.
Aqoonta dhameestiran ee daanta webiga wabigu waa in lagu saleeyaa sifooyinka dusha sare ee uu ku fadhiyo (qaab-dhismeedka toosan), iyo sidoo kale noocyada ka kooban iyo cabbirkooda (qaab-dhismeedka toosan), iyo sidoo kale booskooda webiga iyo horumarkooda la filayo waqti ka dib.
Qaab dhismeedka tooska ah, kaynta dooxyadu waxay soo bandhigaysaa urur adag, oo ay sameeyeen dabaqyada soo socda horumarkeeda ugu weyn:
Lakabka geed- Caadi ahaan noocyo badan, laakiin inta badan waxaa xukuma hal nooc oo lakab kasta ah.
Stratum geed: Waxa samaysma dirxiga geedaha sare iyo dhir kale oo dhir dheer oo qoryo ah ayaa lagu daraa.
Stratum geed: Astaamaha ugu muhiimsan ee geedaha qorraxda jecel ee la xidhiidha jiinka webiga ayaa lakabkan ka dhigaya mid aad muhiim ugu ah nadiifinta iyo cidhifyada kaynta.
Lakabka Herbaceous: guud ahaan si fiican u horumaray gudaha kaynta, oo ay samaysay Albizia julibrissin, oo qani ku ah dhirta juqraafiga hore ee phenological.
Sameynta Lianoid: Sababtoo ah horumarkeeda cajiibka ah, gaar ahaan gobollada kulul ee Isbaanishka, waxay aad ugu egtahay kaymaha webiyada.
Epiphytic stratum: Caadi ahaan waxa ay ka kooban yihiin oo kaliya mosses, beerworts iyo lichens, ku dhawaad ​​had iyo jeer badan oo kala duwan.
Hawlaha deegaanka iyo adeegyada uu bixiyo daanta webigu waa kuwo wajiyo badan leh:
Waxay nidaamiyaan microclimate ee webiga: Dhacdadiisu waa natiijada xakamaynta dhirta dooxada ee xaaladaha cimilada aasaasiga ah ee deegaanka iyo saamaynta dusha sare ee biyaha webiga.
Waxay gacan ka geystaan ​​nidaaminta qaabka iyo dhaqdhaqaaqa webiyada: iyada oo loo marayo awoodda ay ku taageerto samaynta dhirta.
Waxay deegaan ku habboon yihiin tiro badan oo noocyada dhirta iyo xayawaanka ah: sababtoo ah xaaladaha gaarka ah ee microclimate iyo helitaanka biyaha, walxaha organic iyo nafaqooyinka.
Waxay u shaqeeyaan sidii aagagga shaandhaynta si ay uga hortagaan gelitaanka wasakhaha iyo wasakhowga ee sariirta webiga: Waxay ku jecel yihiin goobta ay ku yaalaan gayiga iyo qaabka gargaarka, biyaha iyo hababka bayooloji ee dabeecadda deegaanka webiga.
Waxay u shaqeeyaan sidii meelaha lagu ururiyo biyaha, walxaha organic iyo sediments: socodka walaxda iyo tamarta ee jira waxay la xidhiidhaan socodka walxaha iyo tamarta laga soo saaro deegaanka biyaha ee khuseeya.
Waxay u adeegaan sidii meelaha buuxinta biyaha dhulka hoostiisa: sababtoo ah waa meelaha ay ku urursan yihiin biyaha, walxaha organic iyo sediments.
Waxay leeyihiin qiime muuqaal ah oo muhiim ah.
Erayga 'ribera' waa in aan lagu khaldin 'webi', oo la mid ah durdurka, kaas oo ah qulqulka dabiiciga ah ee biyaha sida caadiga ah u qulqulaya si joogto ah, laakiin, si ka duwan webiga, qulqulkiisu yar yahay oo xitaa laga yaabo inuu baaba'o xilliga qalalan.
Kaymaha ku xidhan
Kaymaha rafaadku waa hab-nololeedka deegaanka weligood cagaarka ah ee ka soo baxa marin-biyoodyada. Sababta oo ah meelahaas ayaa ilaaliya qoyaanka ciidda waqtiyo kala duwan ee sanadka. Waxay yihiin hab-nololeedyo doorsooma meel bannaan iyo waqti. Isbeddellada goobtu waxay ka muuqdaan isbeddellada qaab-dhismeedka toosan, toosan iyo toosan ee kaynta. Isbeddelka waqtigu wuxuu la xiriiri karaa dhacdooyinka xilliyeed ama random.
Waxay ka kooban yihiin deegaanka tiro badan oo noocyo ah: waxay ka mid yihiin foomamka dhirta oo leh kala duwanaansho badan oo qaab-dhismeedka, physiology iyo la qabsiga taranka, taas oo u oggolaanaysa inay ku noolaadaan ciidda daadsan. Waa deegaan, gabaad iyo marin xoolo badan. Maxaa intaas dheer, Waxay muhiim u yihiin ilaalinta tayada deegaanka sababtoo ah waxay soo farageliyaan qabashada nafaqooyinka wasakhaysan ee biyaha iyo wasakhda. Sababtan awgeed, waa hab-nololeedyo loo isticmaali karo in lagu hormariyo nadaafadda deegaanka meelaha wasakhaysan.
Kaymaha webiyada waxaa ka mid ah bulshooyinka dhirta ugu kala duwan uguna wax soo saarka badan. Waxay soo saaraan noocyo kala duwan oo deegaan iyo microclimates, waxayna taageeraan tiro badan oo noocyo ah. Intaa waxaa dheer, waxay gacan ka geystaan ​​isku xirka meelaha fogfog waxayna u dhaqmaan sida marinnada deegaanka ee fududeeya kala firdhinta shakhsiyaadka iyo qulqulka hidda-socodka.
Dhinaca kale, tamarta iyo agabka ay bixiyaan kaymaha ayaa lama huraan u ah ilaalinta shabakada nafaqada biyaha. Caleemaha, laamo, iyo geedo ku dhaca webiyada iyo durdurrada waxaa qabanaya geedo iyo dhagaxyo dhacay. Waxay siiyaan cunto iyo hoy kalluunka yaryar, qolofleyda, amfibiyaanka, cayayaanka, iwm., waxayna aasaas u yihiin shabakada cuntada ee hab-nololeedyada biyaha.
Shaqooyinka kaynta dooxada
Kaymaha webiyada ayaa door muhiim ah ka ciyaara xakameynta cimilada yar ee webiyada iyo durdurrada iyadoo la xakameynayo heerkulka xad dhaafka ah. Cimilada ama xilliyada aadka u kulul, kaymaha ayaa go'doomin doona shucaaca qorraxda, hoos u dhigista heerkulka biyaha, sidaas awgeedna waxay yareeyaan uumiga. Dhanka kale, xilliga qaboobaha ama xilliyada, kaymaha ayaa ilaaliya kulaylka ciidda iyo jidhka biyaha, iyada oo biyaha lagu ilaalinayo heerkul sare.
Kaymaha webiga ayaa aad muhiim ugu ah nadaafadda deegaanka iyo ilaalinta tayada biyaha webiga. Waxay ka saaraan wasakhda biyaha waxayna go'doomiyaan, shaandheeyaan ama beddelaan nafaqooyinka iyo wasakhowga kale.
Nidaamyada deegaanka ayaa ka saara Nitrate-ka xad-dhaafka ah ee ka yimaada haadka biyaha, kuwaas oo intooda badan ka yimaada dhaqamada beeraha ee aan la waari karin. Nidaamyada ku lug leh qaybtan wareegga nitrogen waa denitrification iyo qaadashada nitrate ee dhirta.
Denitrification waa beddelaad kiimikaad ee nitrate-ka oo loo beddelo nitrogen oo ah qaab nitrogen molecular ama ogsaydhiin. Sidaa darteed, Nitrojiin ku milmay biyaha ayaa laga saaraa oo lagu sii daayaa jawiga.
Dhanka kale, Nitrate-ka ay nuugaan dhirtu waxay ka iman kartaa ciidda ama biyaha. Waxay isku daraan unugyadooda waxayna u beddelaan noole geedeedka. Sidan oo kale, nitrogen ayaa laga soocaa dhexdhexaadinta dhaqanka waxaana lagu kaydiyaa waqti dheer. Labada habba waxay yareeyaan qadarka nitrogen ee la heli karo ee ku milmay biyaha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto jiinka webiga iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Bangiyada